B10B စျေးကွက်အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအလေ့အကျင့် ၁၀
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 6, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Douglas Karr
သြဂုတ်လတွင် ဆော့ဝဲ ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံမှစစ်တမ်းတစ်ခုကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMB)၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဖြေဆိုသူ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်အိုင်တီတွင်ရှိနေပြီးနမူနာမှာယူအက်စ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကနေဒါအဖွဲ့အစည်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
အော်ဟစ်သင့်သောတင်ဆက်မှု၏အသွင်အပြင်တစ်ခုမှာမှတ်ချက်များ၏ Wordle ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာနှင့်အချိန်မီအကြောင်းအရာ အဲဒါလိုအပ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းယူ ဖြစ် တိကျစွာရေးသားခဲ့သည်!
Tags: b2bb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းitMari အဘိဓါန် Smith ကအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းMTB ရေဒီယိုပြည်သူ့ကဏ္ sectorဆက်ဆံရေးစျေးကွက်အသေးစားစီးပွားရေးsmbအချစ်စစ်တမ်းစစ်တမ်းရလဒ်များ
Aw, heck ။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း!
၂၀၁၁ အတွက်ထိပ်တန်းနည်းပညာ ၁၀ ခု၏ Gartner ခန့်မှန်းချက်
ဒီဇင်ဘာ 29, 2010 မှာ 3: 22 AM
Doug၊ ၎င်းသည် Softchoice ၏ သုတေသနအတွက် အသုံးဝင်သော ဆလိုက်အနှစ်ချုပ်နှင့် ဗီဒီယိုအပ်ဒိတ်တစ်ခုဖြစ်သည် (သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရွေးချယ်မှုကြောင့် အနည်းငယ် 'အောင့်ထားမိသည်' ဟု ခံစားမိသော်လည်း၊
တစ်ခါတရံမှာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ desktops/Laptops တွေကနေ FB နဲ့ Twitter ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ တွေးမိပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာ အပေးအယူ အလျှော့အတင်းများ ရှိပါသည်။ 'သမားရိုးကျ' ကော်ပိုရိတ်အင်တာနက် firewalls တွေက lock down မလုပ်ထားတဲ့အခါ အဲဒီကိရိယာတွေကို စမတ်ဖုန်းတွေဆီ ဝင်ရောက်ဖို့ တိုးများလာနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
slideshare အနှစ်ချုပ်ကနေ b8b နည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဦးတည်တဲ့ ကမ္ဘာအမြင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီး အကြံပြုချက် #2 ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုးကားထားသော တုံ့ပြန်မှု ခုနစ်ခုသည် အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာတိုများကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း၊ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်သောလူသားတစ်ဦးနှင့် ဖြစ်နိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကို အသိပညာပေးပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် အခြားသောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေကို မှတ်ထား။
စမတ်ဖုန်းများ (နှင့် တက်ဘလက်များ) သည် ကော်ပိုရိတ်လောကတွင် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် တိုတောင်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော “အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်” အပိုင်းအစများကဲ့သို့ မျက်လုံးများနှင့် နားစည်များကို ပိုမိုတိုင်းတာပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖလှယ်ရန် ဥပမာ- webinars များနှင့် ရေးထားသောအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးမည့် နှစ်သက်ဖွယ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။